ဖန်စီရင်ဆိုင်ခဲ့ရသည်အထပ်သား - တရုတ် Weifang အားရွှင်လန်းပင်လယ်ကုန်သွယ်ရေး
1. ပရိဘောဂ: အခန်းထဲမှာပရိဘောဂ, အိပ်ခန်းပရိဘောဂ, လေ့လာမှုပရိဘောဂ, သားသမီးရဲ့ပရိဘောဂ, မီးဖိုချောင်ပရိဘောဂနထေိုငျပန်းကန်ပရိဘောဂ,
2. ဇယားများနှင့်ကုလားထိုင်: စားပွဲပေါ်မှာ, ကျောင်းသားစားပွဲနှင့်ကုလားထိုင်, စာသင်ခုံ, စားပွဲ, စားပွဲခုံ, ကွန်ဖရစားပွဲပေါ်မှာ, ကွန်ပျူတာစားပွဲခုံ
3. အလှဆင်အမျိုးအစား : အတွင်းပိုင်းအလှဆင်, အတွင်းပိုင်းပန်းချီကားများ, ရုပ်ပုံဘောင်, အနုပညာဓာတ်ပုံများ, ရှုခင်းအလှဆင်ပန်းချီ
4. Office ကိုအမျိုးအစား: ဝန်ထမ်းစားပွဲ, ကွန်ပျူတာပုံး, ရှေ့စားပွဲခုံ, ကုမ္ပဏီမိုးလုံလေလုံလမ်းဘေးကြော်ငြာဆိုင်းဘုတ်
5. ရွှေ့ပြောင်းတံခါးများ: အပြားတံခါး, အခန်းဘုတ်အဖွဲ့
6. အခြားအမျိုးအစား: ပြပွဲ ပရိဘောဂ, စျေးဝယ်တန်ပြန်ပရိဘောဂ, ကုန်တိုက်ကြီးတွေ partitions ကို, လက်မှုပညာ
ပြုလုပ် Weifang အား Joysea ကုန်သွယ်ရေး Co. , Ltd မှ
ကုန်ပစ္စည်း Fancy veneer အထပ်သား
အရွယ် 1220X2440MM, 915X1830MM
သည်းခံနေခြင်း +/- 0.3mm
ပင်မပစ္စည်း လိဗနာ, WBP ကော်
Formaldehyde လွှတ်ပေးရန်စံ E0, E1, င 2
လက်မှတ် ISO9001, ISO14001 အမေရိကန် CARB
ငွေပေးချေမှုရမည့် TT, မျက်မှောက်မှာ, L / C ကိုပုံမှန် Client ကိုအဘို့ကျနော်တို့ပိုကောင်းငွေပေးချေမှုအသုံးအနှုန်းများရှိသည်။
အထပ်သားဆယ်စုနှစ်များအတွက်အများဆုံးအသိအမှတ်ပြုခြင်းနှင့်ယုံကြည်စိတ်ချရသစ်သားအဆောက်အဦထုတ်ကုန်များ၏တဦးတည်းဖြစ်ခဲ့သည်။ Cross-လမိုင်း veneer ၏ပါးလွှာသောစာရွက်များကနေထုတ်လုပ်နှင့်ခိုင်ခံ့သောကော်နှင့်အတူအပူနဲ့ဖိအားအောက်တွင်ကပ်လျက်တည်ရှိ, အထပ်သားပြားများသာလွန်ရှုထောင်တည်ငြိမ်မှုနှင့်တစ်ဦးအလွန်အစွမ်းထက်တဲ့အစှမျးသတ်တိ-to-အလေးချိန်အချိုးရှိသည်နှင့်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်အပူချိန်နှင့်စိုထိုင်းဆအတွက်သက်ရောက်မှု, ဓာတုပစ္စည်းများနှင့်အပြောင်းအလဲများမှအလွန်အမင်းခံနိုင်ရည်ရှိပါတယ် ။
အခမဲ့ 6.Provide ထုတ်ကုန်စက်မှုလုပ်ငန်းခေတ်ရေစီးကြောင်း, ဖောက်သည်များ '' အမှန်တကယ်အခြေအနေနှင့်အညီထုတ်ကုန်များနှင့်ဖြေရှင်းနည်းများအကြံပြုပါသည်။
7. ဖောက်သည် '' ကုန်အမှတ်တံဆိပ်ပုံနှိပ်ခြင်းနှင့်မြှင့်တင်ရေးတို့အတွက်အခမဲ့လူသိရှင်ကြားပစ္စည်းများပေးပါ။
10.We ထိုကဲ့သို့သောဘွတ်ကင်ဟိုတယ်များ, လမ်းပြသောအကူအညီနဲ့ဝယ်, အခြားကုမ္ပဏီများ '' သတင်းအချက်အလက်စစ်ဆေးနေနှင့်အခြားထုတ်ကုန်များအရည်အသွေးမြင့်ရောင်းသူရှာနေအဖြစ်ရေရှည်ဖောက်သည်မှတရုတ်အတွက်အခမဲ့ဝန်ဆောင်မှုများကိုပေး။
1, သင့်ရဲ့ MOQ ကဘာလဲ?
ကျွန်ုပ်တို့၏ MOQ များသောအားဖြင့် 20ft ကွန်တိန်နာသို့မဟုတ် 40ft ကွန်တိန်နာဖြစ်ပါသည်
အဆိုပါပေးပို့အချိန်ကိုလက်ခံရရှိသည်သင်၏သိုက်ပြီးနောက် 15days အတွင်းများသောအားဖြင့်ဖြစ်ပါသည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏အဓိကထုတ်ကုန် core ကိုပစ္စည်းများ E0, E1, င2/ MDF / မှုန်ဘုတ်အဖွဲ့ / Block ကိုဘုတ်အဖွဲ့ / HPL လမိုင်း Panel များ / အမြင့်ရတဲ့အရာတွေ acrylic Panel များ / ရေစိုခံဘုတ်အဖွဲ့ / Anti-မီးဘုတ်အဖွဲ့ / polyester နှင့်အတူ Veneer Panel များနှင့်အတူထင်းရူးအထပ်သား / ထင်းရူး LVL / မယ်လမင်းဘုတ်အဖွဲ့များမှာ ဗဓေလသစ်ပျဉ်ပြား / စက္ကူဒါပေါ်မှာပျဉ်ပြားနှင့်မွမ်းမံပြီးမှနှင့်ရင်ဆိုင်ခဲ့ရသည်။
မှန်ပါသည်, နမူနာအခမဲ့နှင့်ကုန်တင်တာဝန်ခံသင့်ရဲ့ဘေးထွက်အတွက်စုဆောင်းမည်ဖြစ်ကြောင်းဖြစ်ပါတယ်။ အမိန့်ကိုအတည်ပြုပြီးနောက်, ဤ charger ကိုမြေတပြင်လုံးငွေပေးချေမှုမှပယ်ယူနိုငျသညျ။
နောက်တစ်ခု: HPL လမိုင်းအထပ်သားယူအက်စ်အေ / 1220x2440mm Formica HPL လမိုင်း Sheet များမှ
Combi Core အထပ်သား
ကုန်သွယ်လုပ်ငန်းခွန်ရော်ဘာ Wood ကအထပ်သား
ကွန်ကရစ် Formwork ရုပ်ရှင်ပွဲတော်မျက်နှာအထပ်သား
ပွငျပအ grade ထပ်သား
ရုပ်ရှင် coated အထပ်သား
ရောနှောထားသော Core အထပ်သား
ပလတ်စတစ် coated အထပ်သား
အထပ်သား Panel ကို
အထပ်သား Sheet များ